Ini, Julia, iyo nyaya yezvakaitika zvaJulia Domna | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Mabhuku, Novela
Ini, Julia yakava mu2018 runyorwa rwegumi rwakaburitswa nemunyori wechiSpanish Santiago Posteguillo. Yakafanirwa neiyo Planeta Mubairo gore rimwe chetero, inyaya yenhoroondo yakavakirwa pazviitiko zvaJulia Domna. Mumwe wevakadzi vane simba kwazvo mukati mehutongi hwehutongi muEuropean yese uye zhinji yeAfrica kusvika pakutanga kweMiddle Ages.
Chinyorwa chakaburitsa huwandu hwakanaka hwekutengesa, nenzira iyi, yakagonesa zita remunyori wayo pakati pezita revanyanzvi muAkare Roma uye neRoma Humambo. Iri basa rizere neyakavimbika dhata, yakanyorwa nenzira isingagone uye yekongiri nenzira yakaenzana. Naizvozvo, vaverengi havagone kusiyanisa pakati pezvinoitika chaizvo zvakaitika nezviya zvakatorwa kubva mukufungidzira kwemunyori wechiSpanish.
2 Julia Domna: protagonist
2.1 Dambudziko rega mukana
3 Iyo inoverengeka, ini, Julia
3.1 Bonde risina kusimba?
3.2 Iyo "yekunyepedzera" nyaya
4 Chiedza, kunge feather
5 Nyowani trilogy?
Santiago Posteguillo Chiremba wePhilology, akadzidziswa kuYunivhesiti yeValencia, kumusha kwake. Ndiye zvakare nyanzvi muChirungu Zvinyorwa -zvakanyanya murondedzero yezana ramakore rechiXNUMX- chidzidzo icho iye ari purofesa akachengetedzwa paJaume I University yeCastellón.
Kubva kutanga kwake munyika yetsamba na Africanus: mwanakomana we consul (2006), purofiti inogadzirwa nebasa rake inomutendera kuti ararame chete nekunyora. Kunyanya mushure mekuburitswa kwe Kutengeswa kweRoma (2009), wekutanga ainyanya kutengesa mukatalog yayo. Zvisinei, - mumashoko ake pachake- anofarira kudzidzisa zvakanyanya uye anodzidza kubva pahudiki hwake zvakanyanya kupfuura zvaanodzidzisa.
Julia Domna: protagonist
Julia Domna akaberekwa muna AD 160. C., munzvimbo dziri dzeSyria nhasi. Yakaumbwa mukati memhuri yevapristi vechiArabhu, muna 187 akaisa chisimbiso mugumo wake nekuroora Septimius Severus. Hunhu panguva iyoyo ndiyo yaive chiremera chepamusoro mudunhu reRoma Gaul Lugdunense kana Celtic Gaul. (Dunhu parinomira Lyon, kuchamhembe kweFrance).
Pakati peino nguva, Emperor Commodus ane mukurumbira aigara pakati pehushe hweRoma. Mutungamiri asingafarirwe zvakanyanya mubhodhi. Nekudaro, iyo Seneti pamwe nevemauto vakasangana kuti vatore danho rakatungamira kuurawa kwake muna 192.
Dambudziko rega mukana
Dambudziko raive risisiri mutongi anodzvinyirira, ane huwori uye ane hunhu. Roma yaizunguzika kubva mubutiro remagetsi rakagadzirwa nerufu rwaCommodus. Pasina vadyi venhaka, Seneti yakaedza kutumidza mutsivi. Asi haina kuzivikanwa nemauto. Mushure menguva dzechokwadi chekusavimbika, Septimius akafamba nemauto ake ku "guvhu repasi" uye muna 193 akazvizivisa kuti Emperor.
Vashoma kwazvo vakaramba, nekutenda muchikamu chikuru kune husingagumi hunyengeri hwemukadzi wake. Mukadzi aive nekwaniso yekuzvarwa kuita seanoshanda mune zvematongerwo enyika. Uye, hongu, pasina kuenzanisa pakati pevamwe vakadzi vehumambo (kwete pakati pevarume). Naizvozvo, mutungamiriri mutsva akakwanisa kugara musimba kwemakore anoda kusvika makumi maviri. Rufu rwake chete ndirwo rwakakwanisa kukanganisa basa rake.
Iyo inoverengeka, Ini, Julia
Unogona kutenga inoverengeka apa: Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.
Iwo mavara anotangira kubva panguva idzodzo dzekusagadzikana kusagadzikana uye kusaenderana mumazuva eCommodus ari pamusoro peMambo kusvika pakufungidzira kwesimba naSeptimius. Ongororo yenhoroondo pamwe nezvakanyorwa sezvazvinonyatsotsanangurwa pakati penhema dzakasimudzwa.
Rondedzero inotungamirwa nevanhu vashanu vakasiyana, avo vanogovana tarisiro yenyaya. Varume vana nemukadzi mumwe chete, vese vanoshuva simba, asi avo vane simba kushaya simba. Ehezve, chete shamwari dzaDomna dzinokunda kuti nokudaro vave Emperor.
Bonde risina kusimba?
Posteguillo anopinda muhupenyu hweumwe wevakadzi vane simba guru rehumambo uye simba munhoroondo yeWestern budiriro. Munyori haavanze yake yekutsiva maonero ehunhu hwaDomna. Zvakanaka, kupfuura simba rese rakaunganidzwa nemambokadzi uyu, mbiri yese yakaenda kumurume, murume wake, Mutongi.
Asi Semunhu anoshanda wezvematongerwo enyika, haana kurwisana nemhando iyi yezviga. Mukupesana, iye akatora mukana wavo kufurira yega nyika danho kusvika pakakwirira. Zvese izvi zvaigoneka nekuti Septimius aive akapenga murudo naye. Zvino - zvinoenderana nezvido zvake, izvo zvaiwanzoenderana nguva dzose neizvo zvemurume wake - akamushandisa pamadiro.
Iyo "yekunyepedzera" nyaya
Iyo rondedzero inotarisa iri pasirese mukati mehukama hwevatambi, pamwe nehupenyu hwavo hwakavanzika. Uyu ndiwo mupiro wakaitwa naPosteguillo kuakaitika nhoroondo. Izvo zvinoshanda, zvinoshamisa, sechirevo chenhau yake. Ini, Julia. Kune vaverengi vanonyanya kufarira hazvidzivisike kuongorora "chaiko" zvinyorwa zvemanyowani. uye siyana navo nebasa iri. Kururama ndekwechokwadi.
Nechekare mukati mematatu akapfuura akaiswa muRome, munyori uyu akange akafadzwa nekubata kwake kwakatanhamara dhata renguva ino. Ose akateedzana e Scipio muAfrica, se Trilogy nezveTrajan kwete chete ivo vakave anoshamisa mabasa enhoroondo. Iyo inokosheswa zvakaenzana nenhamba yakakura yevanyori venhoroondo seyakavimbika chirevo yehumambo hukuru hwekare.
Chiedza, kunge feather
Chinyorwa chinotambanudza anopfuura angangoita mazana manomwe emapeji uye chine chinomanikidza nhoroondo kusagadzikana mune nyaya yerudzi urwu. Zvese zviri zviviri zvakakosha kuti ukwanise "kutaurira nyaya nemazvo." Zvino, chete neaya mareferenzi maviri, vanyori vazhinji vangangopokana kana iri zano rakanaka kuita chiitiko chakadai. Uye hongu, hazvishamise kuti ivo vanofunga nezve kusatanga basa rehukuru uhu, kunyanya kana vaine mukurumbira wePosteguillo uye vane mukana mudiki wekuratidzirwa kukundikana kuri pachena mumutsara wenyaya wezviitiko.
Mutsara naSantiago Posteguillo.
Asi -kuwedzera uye kutendeka kwezvinyorwa kunze- Ini, Julia imwenje kuverenga. Posteguillo inorova chiyero chakakwana pakati pehukasha uye kunakidza kuendesa inonakidza ngano kubva pakutanga kusvika pakupedzisira. Muchokwadi, kunyangwe uchikwanisa kuziva mhedzisiro yenyaya (kuferefetwa pa internet kwakwana), hazvina kuoma kuti muverengi arambe akabatwa ... Ani naani anotora bhuku iri, anongowana rusununguko kana vangosvika kumagumo peji.
Kuvhara kwe Ini, Julia siya mukana wakavhurika kuti urambe uchiongorora nyika yeiyi yakasimba mambokadzi. Posteguillo haana kuchengeta yake yakakura weboka revaverengi vakamirira kwenguva refu; angangoita makore maviri akaparadzaniswa Uye Julia akadenha vamwari. Chitsauko chechipiri mune dzakateedzana dzakagadzirirwa vadikani vehumambo hweRoma. Zvakanakisa, kuburikidza nekuverenga kunonakidza uye kukurudzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Ini, Julia
Joseph Sheridan Le Fanu. New gore rekuzvarwa kwake
Zvakanakira kuve anodzingwa